Happy New Year to one and all and I am sure 2021 has to beabetter year for most with some visible light at the end of the tunnel. Despite difficult circumstances and having to postpone the club championship by 1 week I am confident we hadavery successful event which respected the current guidelines we are enforced to live with but providedareasonable amount of enjoyment withafun weekend had by all. Again, the course was set up to be traditionally challenging to test all players skills and seek to find the best players in the club across the various divisions. This year witharecord field of players with 128 participants joining we got to seealot of good Golf but unfortunately still no hole in one on either day to claim the available Ducati. Starting with the Ladies divisions we had2new winners of each division with the B claimed by Mrs. Venter afteravery strong round on Saturday and then Division A gross beingavery close battle between9time champion Ma Su Su and newcomer Mrs.Naidoo who overturneda5 shot deficit from day 1 to be the new champion. In the mans division there wasafantastic gross score by U Ah Chan who actually went on to eventually win as he blew the field and course away in round 1 by breaking par with -1, which on the difficult course set up is nothing short of impressive. This enabled him to cruise toastress free 79 on day2foracomfortable 6th victory. Day2score of the day belonged to 2019 and4time champion U Win Sein witha+2 which again on an even more difficult set up for day2was very impressive. As you will see below the top 32 gross scores will battle it out again for the 2021 Matchplay championship. So having concluded the best man and lady players in the club for 2020 we will be hosting the annual Caddie Tournament on Monday 11th January to find the best playing caddie amongst other prizes and all players are welcome to come and show your support for your Caddie to cheer them on.
The Golf shop shall be ready for us to move in to toward the end of January which is exciting and the Golf Academy should complete in February. However, PHGC & Phil Moore have decided to part ways for the best interests of both parties andareplacement for this position shall be appointed ASAP. In the meantime if you purchasedapackage of lessons and have lessons remaining, I will be doing my best to complete these as efficiently as I can. Finally, as the club continues with investments to the infrastructure of the club thus enhancing to international standards the caddie fees shall be restructured to reflect the same price for all players with equality across all players, furthermore significant training plans are being executed during 2021 for the Caddies conducted by ‘Step In Step Up’ and myself to continue improving their knowledge and resulting customer service.
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါလို့ပထမဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။ ကပ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံအသီးသီးက ကာကွယ်ဆေးတွေ့ရှိမှုတွေကြောင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ရဲ့ နှစ်သစ်က ကံကောင်းမှုတွေယူဆောင်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကြားထဲမှာ Club Championship ကို တစ်ပတ်တာနောက်ဆုတ်လိုက်ရပေမယ့် ချမှတ်ထားတဲ့ ကျန်းမာရေးစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အောင်မြင်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ ပါဝင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးလည်း ပျော်ရွှင်ရတဲ့ အချိန်ကာလလေးတစ်ခုရရှိခဲ့မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဂေါက်ကွင်းကိုလည်း ကစားသမားများရဲ့ အရည်အသွေးကိုစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်စေရန်နှင့် လာရောက်ကစားကြသောဂေါက်ကစားသူများထဲမှအကောင်းဆုံးကစားသမားများကိုထပ်မံရှာဖွေနိုင်ရန် ကွင်းအနေအထားများကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုနှစ်မှာ ကစားသမား ၁၂၈ ယောက်ဝင်ရောက်ပါဝင်ခဲ့ပြီး အကောင်းဆုံးစွမ်းရည်တွေကို ပြသကစားသွားကြတာကို မြင်တွေ့ရပါတယ်။ သို့သော်လည်း Ducati ဆိုင်ကယ်ကိုတော့ ပြိုင်ပွဲ ၂ ရက်လုံးမှာ တစ်ချက်တည်းကျင်းဝင်သူမရှိခဲ့တဲ့အတွက် မည်သူမှ မပိုင်ဆိုင်ခဲ့ နိုင်တာအတွက် ဝမ်းနည်းမိပါတယ်။ Ladies divisions မှာ division တခုစီကနေ အနိုင်ရရှိသူအသီးသီးပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ စနေနေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ division B မှာ Mrs. Venter ကအနိုင်ရခဲ့ပြီး Division A မှာတော့ ၉ ကြိမ်တိတိချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ မစုစုနှင့် ကစားသမားအသစ်ဖြစ်တဲ့ Mrs. Naidoo အကျိတ်အနယ်ယှဥ်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီး ပထမရက်ကစားစဥ်ထဲက ၅ ချက်အသာစီးရရှိနေတဲ့ Mrs. Naidoo က ချန်ပီယံအသစ်ဖြစ်လို့လာခဲ့ပါတယ်။ Man Division မှာတော့ ဦးအားချန်မှ ပထမပွဲစဉ်မှာတင် ပါရလဒ် -1 ဖြင့် ခက်ခဲအောင်ဖန်တီးထားတဲ့ ကွင်းအခြေအနေမှာ အလွန်သာလွန်သော ရလဒ်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီရလဒ်ဟာ ဒုတိယနေ့တွင် 79 ရရှိခြင်းဖြင့် ၆ ကြိမ်မြောက် အောင်မြင်မှု ရရှိဖို့အတွက် ပံ့ပိုးမှုပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂ ရက်မြောက်နေ့မှာ အမှတ်အများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့သူကတော့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်က ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီး ချန်ပီယံ ၄ ကြိမ်ဆက်တိုက် ရရှိခဲ့တဲ့ ဦးဝင်းစိန် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုခက်ခဲတဲ့ ဒုတိယမြောက်ရက်မှာ +2 ရရှိပြီး အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက် အင်မတန်တော်ပါတယ်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အမှတ်အများဆုံးရရှိခဲ့သူ ၃၂ ယောက်ဟာဆိုရင် 2021 Matchplay championship အတွက်ထပ်မံယှဥ်ပြိုင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ကစားသမားတွေကို ဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ နှစ်စဥ်ကျင်းပပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ Caddie Tournament ကို ယခုလာမယ့် ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့၊ တနင်္လာနေ့မှာ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းအသိပေးပြောကြားလိုပါတယ်။ ကစားသမားများအနေနဲ့ မိမိရဲ့ ကယ်ရီများကို အားပေးဖို့ လာရောက်နိုင်ပါတယ်။
ဇန်နဝါရီလအကုန်လောက်မှာ The Golf shop က ပြောင်းရွှေ့ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ Golf Academy ကတော့ ဖေဖော်ဝါရီလလောက်မှာ ပြီးစီးဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းနှင့် Phil Moore တို့ကတော့ နှစ်ဦး နှစ်ဖက်လုံးအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေမယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့ပြီး လမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်။ လစ်လပ်သွားတဲ့ နေရာမှာ အမြန်ဆုံးအစားထိုးနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအချိန်အတောအတွင်းအတွက် ဝယ်ယူထားတဲ့ သင်ခန်းစာ package များရှိခဲ့ပါက ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံးသင်ကြားပြသမှုပြုလုပ်ပေးသွားပါ့မယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောကြားလိုတာကတော့ ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနဲ့အညီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိရာ ကယ်ဒီကြေးများကိုလည်း ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်သွားရန်ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ Step In Step Up အဖွဲ့အစည်း သာမက ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီး ကယ်ဒီများကို ဂေါက်အားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေပိုမိုတိုးတက်လာစေရန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှု(customer service) အပိုင်းအတွက်ပါ လေ့ကျင့်မှုတွေ ပြုလုပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
As the course turf is now peaking in many areas where the combination of the natural rain and sun benefit the turf most, we will be executing some maintenance to the fairways towards the end of January to ensure their health and strength going in to the months ahead. With the fairways especially there isareal requirement to perform another verti-cutting which ‘thins’ out the turf. You may notice in certain areas the fairways may feelalittle spongy, so this is why we will core with large tines and then verticut afterwards. We plan to continue our fertilizer programs with stock available to us in Myanmar. After recent soil and water tests we will, where possible, apply products that are suitable to ensure the ongoing health of both the soil and the turfgrass itself. Obtaining the required products for fine turf can beachallenge, however, we are optimistic that products shall be available throughout the coming year. As with all maintenance programs, the turf may not look so beautiful in the immediate aftermath but the long term benefits which follow these programs are essential. Some new additions to the maintenance fleet last month includedanew greens coring machine andanew rough mower. More noticeable new additions are the new ‘Tee Yardage signs’ and ‘Tee markers’ located at each Tee box which were locally carved in Myanmar and made from high quality teak wood.
သဘာဝနေရောင်ခြည်နဲ့မိုးရေတွေကြောင့် ဂေါက်ကွင်းရဲ့ နေရာတော်တော်များများက မြက်ခင်းပြင်တွေဟာ ရှည်လျားလျက်ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဇန်နဝါရီလအကုန်လောက်မှာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ မြက်ခင်းပြင်တွေဖြစ်ဖို့အတွက် fairways အပိုင်းကို ထိန်းသိမ်းပြုပြင်မှုတွေပြုလုပ်သွားနိုင်ဖို့ စီစဥ်လျက်ရှိပါတယ်။ Fairway ကိုလည်းအနည်းငယ်ပါးလွှာရိတ်သိမ်းဖို့လိုအပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အချို့နေရာတွေမှာဆိုရင် fairways တွေကအနည်းငယ်ပျော့အိနေတာကို သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ပါးလွှာရိတ်သိမ်းခြင်းများကို အဓိကထားဆောင်ရွက်ဖို့စီစဥ်ထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ ရရှိနေတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုပြီးတော့ပဲ မြေဩဇာကျွေးတဲ့အစီအစဥ်ကို ဆက်လက် ပြုလုပ်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။ မြေကြီးနှင့် ရေကို စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ သင့်တော်တဲ့ ပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်ပြီး မြေကြီးနှင့် မြက်ခင်းပြင်တုတွေ ပိုမိုကောင်းမွန်လာရေးအတွက် လုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ အကောင်းစားမြက်တွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းကို ရရှိဖို့ဆိုတာ အင်မတန်မှ ခက်ခဲပါတယ်။ သို့သော်လည်း လာမယ့်နှစ်မှာ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေ ပြုလုပ်ပြီးပြီးချင်း မြက်ခင်းပြင်တွေက ချက်ချင်းလှပသွားမှာမဟုတ်ပေမဲ့လည်း ရေရှည်အတွက် အကျိုးရှိတာဖြစ်လို့ ဒီလိုမျိုးထိန်းသိမ်းပြုပြင်မှုတွေက လိုအပ်ပါတယ်။ အရင်လကထိန်းသိမ်းပြုပြင်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့ အစီအစဥ်ထဲမှာ ဂရင်းများကို Coring Machine နှင့် rough mower အသစ် ဖြည့်သွင်းတာတွေပါဝင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အသစ်ထပ်တိုးပြင်ဆင်ထားမှုတွေကတော့ Tee box တခုချင်းစီမှာ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ကျွန်းသစ်ကို အသုံးပြုပြီး ပြုလုပ်ထားတဲ့ Tee Yardage signs များနှင့် Tee markers’ များပဲဖြစ်ပါတယ်။
Congratulations to our Hole In One Winners from November & December.
နိုဝင်ဘာလနှင့် ဒီဇင်ဘာလတွေမှာ Hole In One ရရှိခဲ့သူအားလုံးကို ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်။
Mr. Shin Jin Ho at hole #12 witha9 iron from 135 yards.
Mr. Marcel Dangoumous at hole #12 witha9 iron from 135 yards.
Ms. Park Sang Hee at hole #12 witha7 iron from 97 yards.
Mr. Indren Stephen Naidoo #15 with7iron from 167 yards
We will sadly be saying goodbye to long time member Mr. JH Lee who has very kindly made some donations to Caddies during this pandemic which we are very grateful for and wish you all the best success with your future.
ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းမှာ ကာလရှည်ကြာစွာ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ရှိခဲ့တဲ့ Mr. JH Lee ကိုစိတ်မကောင်းစွာနဲ့နှုတ်ဆက်စကားပြောကြားရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုးခက်ခဲတဲ့ အချိန်ကာလမှာ ကယ်ရီများအတွက် လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်အင်မတန်မှ ကျေးဇူးတင်ရှိပြီး ရှေ့ဆက်လျှောက်မယ့်အနာဂတ်ခရီးလမ်းမှာ ကောင်းမွန်မှုတွေနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းမိသားစုမှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်။
U Kyaw Soe Hein
U Ye Htet Win
Mr. Kita Kazumi
Mr. Oishi Norio
Mr. Yoshinaga Hiromichi
Mr. Takashima Jun
U Sein Aung Tun
Mr. Shuichi Narino
Mr. Nam Sun Woo
Mr. Oh Jung Geun
U Htin Lin Pyae
Mr. Abe Takeshi
Mr. Zheng Weifeng
Mr. Wilson Bernard
U Lway Lwin
U Thaw Zin Maung Maung
Mr. Mio Tsuyoshi
Mg Aung Bo Kaung Thant
Mr. Shojii Tetsunori
U Phyo Wai Tun
U Wai Yan Tun
Mr. Yamada Yoshimitsu
U Zaw Min Tun
Members' Corner – with 2020 Club Champion U Ah Chan
I have beenamember at PHGC for 17 years.
I like the greenery environment of golf course. The game of golf needsalot of focus and attention unlike other sports. It needsalot of practice as well, this is why I enjoy playing golf.
I play it often because this is the sport I really enjoy.
My favorite club is driver and putter. They both play an important role when playing golf.
I don’t haveafavorite caddie. All of the caddies are good.
My favorite hole is 17 because it’sachallenging hole for me and I can haveadifferent experience there.
7. Have you hadahole in one before?
I’ve hadahole in one twice. Once is in Da Nyin Gone Golf Club and another one is at Mu-Se Golf Club. Hole In One requiresalot of luck.
8. If you could play any Golf course, where would it be?
I love to play at Pun Hlaing Golf Club and Da Nyin Gone Golf Club in Myanmar.
9. Who would be in your dream four ball?
If I have to playafour ball, I would like to play with my friend as we are very close to each other. We played together since we started playing golf.
2020 Club Champion U Ah Chan နှင့်အတူ အဖွဲ့ဝင်ကဏ္ဍ
ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းမှာ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တာ ၁၇ နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။
ဂေါက်ကွင်းရဲ့စိမ်းစိုနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို သဘောကျတယ်။ အခြားအားကစားတွေနဲ့မတူပဲ စူးစိုက်မှုတွေ၊ အာရုံစိုက်ရတာတွေတော်တော်လိုအပ်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်မှုတွေအများကြီးလုပ်ရတဲ့ အားကစားဖြစ်တဲ့အတွက် ကြိုက်နှစ်သက်တာပါ။
ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အားကစားဖြစ်နေတဲ့အတွက် မကြာခဏ ကစားဖြစ်ပါတယ်။
၄. အကြိုက်ဆုံးဂေါက်ရိုက်တံရှိလား? ဘာကြောင့်လဲ?
အကြိုက်ဆုံးက driver and putter ပါ။ ၂ ခုလုံးက ကစားတဲ့နေရာမှာ အရေးပါတဲ့အတွက် သဘောကျပါတယ်။
၅. ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကလပ်မှာ အကြိုက်ဆုံး ကယ်ဒီ ရှိလား?
အကြိုက်ဆုံးကယ်ဒီလို့တော့မရှိပါဘူး။ စီနီယာအလိုက်ပဲရိုက်ဖြစ်တယ်။ ကယ်ဒီတွေအားလုံးက အဆင်ပြေပါတယ်။
အကြိုက်ဆုံးက ကျင်းပေါက် နံပတ် ၁၇ ပါ။ တခြားကျင်းတွေနဲ့မတူပဲ တမူထူးခြားတဲ့ အတွေ့အကြုံရရှိစေတဲ့အတွက် ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။
၇. တစ်ချက်တည်းနဲ့ ကျင်းဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့ အတွေ့အကြုံရှိခဲ့လား?
Hole In One ၂ ကြိမ်ရဖူးပါတယ်။ တညင်းကုန်းဂေါက်ကွင်းမှာတကြိမ်၊ မူဆယ်ဂေါက်ကွင်းမှာတကြိမ်ရဖူးပါတယ်။ Hole In One ရဖို့ဆိုတာက ကံနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်။ ဘယ်ချိန်ဝင်မယ်ဆိုတာခန့်မှန်းဖို့ခက်ပါတယ်။
၈. သွားရောက်ပြီးကစားချင်တဲ့ဂေါက်ကလပ်ရှိလား? ဘယ်နေရာလဲ?
မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဆိုရင် တညင်းကုန်းဂေါက်ကွင်းနှင့် ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းမှာ ကစားရတာ အကြိုက်ဆုံးပါ။
၉. စိတ်ကူးထဲက Four ball သာတူတူကစားရမှာဆိုရင် ပါဝင်စေချင်တဲ့သူဆိုရင် ဘယ်သူဖြစ်မလဲ?
Four ball ကစားရမယ်ဆိုရင် အမြဲတမ်းရိုက်နေကြဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ ကစားချင်ပါတယ်။ ဂေါက်ကို စတင်ကစားတည်းက တူတူကစားခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီး ရင်းလည်းရင်းနှီးတဲ့အတွက် သူနဲ့အတူတူ ကစားချင်ပါတယ်။
Caddie's Corner ကယ်ဒီကဏ္ဍ
All of these beautiful ladies will be participating in the upcoming annual Caddie Tournament on Monday 11th January and all players are welcome to come and show your support for your Caddie to cheer them on.
ပုံမှာပါဝင်တဲ့ ကယ်ဒီများအားလုံး ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့၊ တနင်္လာနေ့မှာ ပြုလုပ်မယ့် Caddie Tournament မှာ ပါဝင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကစားသမားများအနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ကယ်ဒီများကိုလာရောက်အားပေးနိုင်ပါတယ်။
Meet Ei Ei Khine,acaddie for9years at Pun Hlaing Golf Club
ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းမှာ ကယ်ရီအဖြစ် ၉ နှစ်တာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ မအိအိခိုင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။
2020 Matchplay Champion
Congratulations to our 2020 Matchplay Champion, U Win Sein.
On Sunday 22 November the final took place between the4time club champion U Win Sein & Mr. Cho Jung Won. It was Mr. Cho Jung Won who made the better start as he raced in to an early2up lead as U Win Sein seemed unsettled with many uncharacteristic errors in his opening holes but once he found his rhythm he managed to turn the match around and take the lead after9holes witha1 up advantage. Then heading in to the back9U Win Sein delivered3birdies on 11, 13 & 16 which enabled him to cruise toa4&2 victory and be crowned our 1st Matchplay Champion.
၂၀၂၀ Matchplay Champion
၂၀၂၀ ခုနှစ် Match Play ချန်ပီယံ ဦးဝင်းရှိန် အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ခြင်း။
နိုဝင်ဘာလ၂၂ရက် မှာ၄ကြိမ်မြောက် ချန်ပီယံ ကိုဝင်းရှိန် နဲ့ Mr . Cho Jung Won ဟာ Director of Golf & Professional Mr.Stephen Chick ရည်ညွှန်းပေးမှုကြောင့် နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ကိုယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါသည်။
Mr. Cho Jung Won ဟာအစောပိုင်း ၂နေရာအသာဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာစတင်နိုင်ခဲ့ပြီး ကိုဝင်းရှိန်ဟာ အဖွင့်ကျင်းပေါက်များတွင် အမှားများနှင့် အခြေအနေမတည်ငြိမ်ခဲ့သော်လည်း စည်းချက်ပြန်လည်ထိန်းညှိလိုက်နိုင်သည်နှင့် ပြိုင်ပွဲကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်နိုင်ပြီး ပြန်လည်ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ရာ ၉ကျင်း အပြီးတွင် ၁နေရာအသာပြန်လည်ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ၉ကျင်းအပြီးကို ထပ်မံဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး birdies ၃ကြီမ်ကိုကျင်းပေါက်နံပတ် ၁၁ ၁၃ နှင့် ၁၆ တို့မှာရရှိခဲ့ပြီး 4&2 အောင်ပွဲရရှိခဲ့သောပထမဆုံး Matchplay ချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့ပါသည်
Congratulations to all the winners and runner-ups in the 2020 Club championships.
၂၀၂၀ Club Championship
၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Club championships မှာ အနိုင်ရရှိသူသွားသူတွေနဲ့ runner-ups ရရှိခဲ့သူအားလုံးကို လှိုက်လှဲစွာ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။
12th Dec 2020 (Saturday)
Lady Division A
Champion - Mrs. Christine Naidoo
Runner Up - Daw Su Su Hlaing
3rd Place - Daw Nan Mo Hawn
Man Division A
Champion - U Ah Chan
Runner Up - U Win Sein
3rd Place - Mr. Gerald Lee
13th Dec 2020 (Sunday)
Lady Division B
Champion - Mrs. Rhelda Venter
Runner Up - Ms. Lim In Hee
3rd Place - Ms. Bak Jungsook
Man Division B
Champion - U Min Lwin
Runner Up - Mr. Choi Jung Wook
3rd Place - U Zayar Aung
Novelties 12th Dec 2020( Saturday)
(LADY) Longest Drive Hole#9 - Daw Su Su Hlaing (200 Yards)
(MEN) Longest Drive Hole#9 - Mg Aung Bo Kaung Thant (290 Yards)
Nearest to the pin – Hole#6 (Man) - Mr. Gerald Lee (11’ 5”)
Nearest to the pin – Hole#6 (Lady) - Ms. Andrea Pun (20 Feet)
Nearest to the pin – Hole #15 (Man) - U Aung Hein (1’ 4”)
Nearest to the pin – Hole #15 (Lady) - Daw Su Su Hlaing (8’ 9”)
Nearest to the pin – Hole#18 (Water Skim) - U Win Sein
Novelties 13th Dec 2020( Sunday)
(LADY) Longest Drive Hole#18 - Daw Su Su Hlaing (176 Yards)
(MEN) Longest Drive Hole#18 - Mg Aung Bo Kaung Thant (290 Yards)
Nearest to the pin – Hole#3(Man) - U Kyaw Myint (2’ 8” )
Nearest to the pin – Hole#3(Lady) - Ms. Andrea Pun (16’ 9” )
Nearest to the pin–Hole#12(Man) - Mr. Odamura Shigeo ( 4’ 3”)
Nearest to the pin–Hole#12(Lady) - Mrs. Rhelda Venter ( 35’ 6” )